Lexio: Gbanwee data gaa n'asụsụ okike | Martech Zone
Lexio bụ usoro ịkọ akụkọ data nke na - enyere gị na ndị otu gị aka inweta akụkọ n’azụ data azụmaahịa gị - yabụ ị ga - arụkọ ọrụ ọnụ, n’otu peeji, site na ebe ọ bụla. Lexio nyochara data gi maka gi wee gwa gi na ndi otu gi ihe ichoro ima. Enweghị mkpa igwu site na dashbob ma ọ bụ pores na mpempe akwụkwọ.
Chee echiche Lexio dị ka newsfeed maka azụmahịa gị nke maralarị ihe dị gị mkpa. Naanị jikọọ na isi mmalite data, na Lexio na-edepụta ihe ndị kachasị mkpa gbasara azụmahịa gị na Bekee doro anya. Wepụta oge gbasoro mgba iji data, yana oge na-eto eto na-akpata.
Lexio maka Ahịa ahịa Salesforce
Lexio ugbu a jikọtara ozugbo na Salesforce Sales Cloud fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Nanị tinye nzere na isi iyi data gị, chere obere nkeji, wee bido ịgụ.
Nweta akụkọ data gị na ekwentị gị, na laptọọpụ gị, ma ọ bụ n'ime ngwa ọrụ kachasị amasị gị.
Akụkọ dị mfe, dị mfe nghọta, na eleghị mmadụ anya n'ihu gbasara data gị.
Jikọọ na isi mmalite data na nkeji na nhazi efu.
Muta ihe banyere Lexio ma nweta akuko data nke gi. Chọrọ ide banyere data dị iche iche karịa isi mmalite dị n'elu? Nsogbu adịghị. Hazie nzukọ ma anyị ga-eso gị rụ ọrụ.
Rịọ Lexio Demo
Lexio maka nchịkọta Google
Lexio nwere ntinye na Google Analytics, ị nwere ike ịhụ ngosi nke ngwaahịa ebe a
Mkparịta ụka mmekọrịta nke Lexio maka nchịkọta Google
Njikọ Lexio maka Marketo, Hubspot, Salesforce Service Cloud, Mgbasa ozi Google, Microsoft Dynamics, ZenDesk, MixPanel, na Oracle nọ na mmiri.
Tags: AnalyticsGoogle Analyticslexiosayensị akụkọasụsụ nkịtịOraclequill itinye akaigwe ojiindị ahịasalesforce ahịa ígwé ojii